कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा देशमै पहिलो पटक सुसार कार्यक्रम लागु – Enayanepal.com
कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा देशमै पहिलो पटक सुसार कार्यक्रम लागु
२०७६, २७ भाद्र शुक्रबार मा प्रकाशित
उच्च शिशु मृत्युदरलाई ध्यानमा राख्दै कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा देशमै पहिलो पटक सुसार कार्यक्रम शुरु भएको छ । गोल्डेन कम्युनिटी नामक संस्थाको सहयोगमा कार्यक्रम लागु गरिएको छ । नबजात शिशु जन्मदा मुटुको धड्कन जाचका लागी नियोबीट, भ्रुणको मुटुको जाँचको लागी कृतिम मास्क तथा व्याग, लगाएत आधुनिक उपकरणहरुसंस्थाद्घारा उपलव्ध भएकोे अस्पतालका सुपरिटेन्डेन्ट डा. डम्मर खड्काले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश अस्पतालले सिमिति श्रोतसाधनका बाबुजत पनि आवश्यक उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको छ । उपलव्ध सेवा प्रदान गर्न सवै वार्डका कर्मचारीहरुलाई तालीम दिईएको गोल्डेन कम्युनिटिका सृजना शर्माले बताईन । कर्णालीमा भने यसको दर २९ प्रतिशत रहेको छ कर्णाली प्रदेश अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीले जानकारी दिए । गत महिना मात्रै ६ सय जना नवजात शिशु जन्मेकोमा १५ शिुशुको मृत्यु भएको डा. केसीको भनाई छ ।
जसमध्ये १० नवजात शिशु आमाको पेटमै मृत्यु भएको हो । नवजात शिशु मृत्युदरको मुख्य कारण नै बाल विवाह रहेको पाईएको छ । १५÷१६ वर्षकै उमेरमा बच्चा जन्माउनाले आमा र बच्चा दुवैको ज्यान जोखीममा पर्ने गरेको डा.केसीले बताए ।
अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी मात्रै धेरै उपलव्ध भएर शिशुमृत्युदरलाई कम गर्न नसकिने उनकोे भनाई थियो ।
कर्णाली अस्पतालमा विशेषगरी छोरी जन्मना साथ स्वास्थ्य ठिक नहुदा नहुदै पनि अस्पताल नवस्ने गरेको पाईएको बताए । शिशु जन्मनासाथ उचित स्याहार सुसार नपाउदा जन्मेको २÷३ घण्टामै ज्यान जाने गरेको बताए । नेपालका विभिन्न ८ ओटा सरकारी अस्पतालहरुमा सुसार कार्यक्रम लागु गरिएको छ ।
न्र्तक्रियामा नेपालमा हरेक वर्ष ११ हजार मृत्यु शिशुहरु जन्मने गरेको तथ्याङ्क समेत प्रस्तुत गरिएको छ । सन २०३० सम्म यसलाई १२ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । शिशुमृत्युदर लाई कम गर्न सामाजिक सचेतनाका क्षेत्रमा कलम चलाउन पनि संचारकर्मिहरुलाई सरोकार वालाले आग्रह गरेको छन ।